Edemede Andrew K Kirk na Martech Zone |
Edemede site na Andrew K Kirk
Psychology nke Social Networking bu ihe omuma di egwu nke ndi otu ndi psychologydegree.net wetara anyi. Agụnyere bụ ụdị akụkọ ị na-ahụkarị maka iji mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ịba ụba na ndụ anyị. Mana enwere ike ịchọta ozi na-atọ ụtọ na ọkara ọkara nke onyonyo a, ebe ndị otu ahụ na-erute n'obi nke ihe kpatara anyị jiri netwọkụ mmekọrịta. Ma maa ihe ha hụrụ? Na-apụ maka ọtụtụ n'ime anyị, na mmetụta uche anyị
Sunday, July 8, 2012 Thursday, June 18, 2015 Andrew K Kirk
Twitter ekwuputala usoro nke ohuru nke gha eme ka ihe ichoro na nyocha. Nwere ike ịchọ ugbu a, egosiri gị Tweets, isiokwu, akaụntụ, onyonyo na vidiyo dị mkpa. Ihe ndị a bụ mgbanwe: Mpepe nsụgharị: Ọ bụrụ na ịpebie otu okwu, Twitter ga-egosi na-akpaghị aka nsonaazụ gị. Ntụnye metụtara: Ọ bụrụ n'ịchọrọ isiokwu nke ndị mmadụ na-eji ọtụtụ okwu, Twitter ga-enye ntụnye dị mkpa maka okwu ndị yiri ya. Nsonaazụ nwere ezigbo aha
N'adịghị ka ụdị ahịa ndị ọzọ dị iche iche, ịzụ ahịa mgbasa ozi ọha na eze dịka ndị nwe ụlọ ahịa nwere ike ikwenye dịka ọ na-enweta ụlọ ọrụ 500 Fortune. Ihe omuma ihe omuma a na egosi ihe mgbasa ozi ndi mmadu na ahia gi.